स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी बानी – News Dainik
स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी बानी
News desk २८ पुष २०७६, सोमबार ०९:३५ स्वास्थ्य प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौँ । मानिस स्वस्थ रहनका लागि सर्वप्रथम हाम्रो खाना प्रमुख विषय हुने गर्छ । हामीले दैनिक खाने खानाले हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यद्यपि केवल एउटै परिधिमा मात्रै स्वस्थ जीवन अडिएको भने हुँदैन । किनकी हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वातावरणीय तत्व, वंशाणुगत तत्व तथा आचरण र मानसिक अवस्थाका भागहरुले पनि उतिकै भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
केही आधारभूत नियमहरुलाई यदि हामीले बानीको रुपमा विकास गर्न सक्छौँ भने हाम्रो स्वस्थ जीवन बाँच्ने सपना धेरै हदसम्म पूरा हुन सक्छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु श्रेयष्कर हुन्छ ।
स्वस्थ रहनका लागि यी बानी अपनाउ
प्राकृतिक खाना नै रोज्नुस्ः हामीले बजारमा पाउने धेरै खानाहरुमा शरीरलाई आवश्यक तत्वको कमी हुने गर्छ । त्यस्तै, मिठो स्वाद र रंगीन देखिने बनाउन प्रयोग गरिने अखाद्य किसिमका रसायनहरु हुने भएकाले पनि त्यस्ता खानेकुराको नियमित उपयोगले हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गरिरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँको सेवन बेग्लै कुरा हो तर सकेसम्म आफ्नो निरन्तर खानाको लागि प्राकृतिक खाना तथा फलफूल नै प्राथामिकतामा राख्नुस् । सिजनअनुसारका फलफूल, सागपात, गेडागुडी, आलु, चना, केराउ, आदि नियमितरुपमा उपयोग गर्नुहोस् ।
चलायमान बन्नुहोस्ः मानिसले आफूलाई फिट तथा तन्दुरुस्त राख्न धेरै कडा किसिमका शारीरिक अभ्यास गर्ने गर्छन् । यद्यपि पछिल्ला अनुसन्धानले दैनिक केवल १५र२० मिनेटको को शारीरिक अभ्यास वा हप्तामा २ घण्टाको सामान्य हिँडाइले नै मानिसलाई आफ्नो स्वास्थ्य सन्तुलित बनाउन सहयोग गर्दछ ।
विषादीयुक्त वस्तु उपयोगबाट टाढै बस्नुस्ः टक्सिन् भन्ने बित्तिकै अल्कोहलिक पदार्थ तथा धुम्रपानको प्रयोग भन्ने बुझिन्छ तर हामीले नियमित प्रयोग गर्ने चिनीको मात्रा, धेरै चिल्लो पदार्थ तथा बोसोयुक्त खाना, आदिले पनि स्वास्थ्यलाई शरीरमा स्लो पोइजनको काम गरिरहेको हुन्छ । तसर्थ यस्ता खानेकुराबाट सम्भव भएसम्म टाढै रहनु उचित हुनेछ ।
ध्यान गर्नुस्ः नियमित ध्यान गर्नाले मानिसको रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुने, मस्तिष्कमा खुशी प्रदान गर्ने किसिमका सेरोटोनिन, एन्डरफिन्स जस्ता मस्तिष्क रसायनहरु उत्पादन हुने, तनाव व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, सृजनशील बनाउने लगायतका दर्जनौँ फाइदाहरु हुन्छन् । तसर्थ केही समय आफैँभित्रको यात्रामा सामेल भएर पनि आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुहुन्छ ।
प्राकृतिक ठाउँको घुमघामः प्रकृतिको काखमा रमाउन कसलाई पो मन नपर्ला र रु वास्तवमा रिसर्चहरुले के देखाएका छन् भने जति हामी प्रकृतिसँग साक्षात्कार गर्छौँ त्यति नै हाम्रो स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि सहयोग गर्छ । हामी भित्रको हार्मोनल सन्तुलनमा समेत काम गर्छ ।
त्यस्तै केही समय घाममा बसेर प्राप्त हुने भिटामिन ‘डि’ ले माटोपना घटाउने, हार्मोनसम्बन्धी समस्या तथा क्यान्सरसम्म लाग्न नदिने कार्यमा मद्दत गर्दछ । तर धेरै समयमा घाममा रहँदा विकिरणहरुको नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ, यसमा भने सचेत हुन आवश्यक छ ।
अघिल्लॊ फिलिपिन्समा ज्वालामुखीका कारण वायूप्रदुषण
पछिल्लॊ गौर कारागारबाट कैदीबन्दी फरार
काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना भ्याक्सिन आउने बेला अघिसम्म विश्वभर २० लाख …